I-Visa yaseNdiya yabemi base-US | Izidingo ze-eVisa ezivela e-US
I-Visa yaseIndiya yabemi baseMelika
Iimfuno ze-eVisa ezivela e-US
India eVisa evela e-US
Abemi baseMelika banako Faka isicelo se-eVisa India
I-United States yayililungu lokwazisa lenkqubo ye-India eVisa
Abemi baseMelika bakonwabela ukungena ngokukhawuleza besebenzisa inkqubo ye-India eVisa
Abemi baseMelika bangafaka isicelo se-India eVisa kwi-Intanethi
I-Visa yase-India iyafumaneka kubemi base-United States ifomu yokufaka isicelo ukusukela ngo-2014 ukusukela kwi URhulumente waseIndiya. Le visa eya eIndiya ivumela abahambi abavela eUnited States kwaye kwamanye amazwe Ukutyelela i-India ukuhlala ixesha elifutshane. Oku kuhlala ixesha elifutshane kuhleli phakathi kweentsuku ezingama-30, 90 ne-180 kutyelelo ngalunye kuxhomekeke kwinjongo yotyelelo. Zintlanu iindidi eziphambili ze-Visa yaseIndiya (India eVisa) efumaneka kubemi baseMelika. Amacandelo afumanekayo kubemi baseUnited States ukuba batyelele eIndiya phantsi kwemigaqo ye-elektroniki ye-India Visa okanye ye-eVisa India yenzelwe ukhenketho, utyelelo kushishino okanye utyelelo lwezonyango (zombini njengesigulana okanye umongi / umongikazi kwisigulana) ukutyelela i-India.
Abemi base-United States abatyelele e-India ukuzonwabisa / ukubona indawo / ukuhlangana kwabahlobo / izihlobo / inkqubo yexesha elifutshane ye-yoga / izifundo zethuba elifutshane elingaphantsi kweenyanga ezi-6 ngexesha lokufaka isicelo bangazenza iVisa ye-elektroniki ye-Indiya yezoKhenketho eyaziwa ngokuba yi-eTourist Visa nokuba yey 1 inyanga (ukungena kabini), unyaka o-1 okanye iminyaka emi-5 yokuqinisekisa (amangenelo amaninzi eIndiya phantsi kwexesha ezimbini zevisa).
Abemi base-United States banokufaka isicelo se-Visa yaseIndiya ye-elektroniki (eIndia eVisa) ekwi-intanethi kule webhusayithi kwaye banokufumana i-eVisa eya e-India nge-imeyile. Inkqubo yenziwe lula kakhulu kubemi baseMelika. Into efunekayo kukuba ube ne-imeyile ye-imeyile, ikhadi letyala / leDefault kwelinye lezemali ezili-133 okanye Paypal. I-Visa yaseIndiya ye-elektroniki (i-India eVisa) luxwebhu olusemthethweni oluvumela ukungena nokuhamba ngaphakathi eIndiya.
Abemi base-United States bayakufumana i-eVisa yabo nge-imeyile, emva kokuba beyigcwalisile ifom yesicelo ekwi-intanethi ngolwazi olufunekayo kunye nokuhlawulwa kwekhadi letyala kwi-Intanethi.
Abemi baseMelika baya kuthunyelwa kwikhonkco kwidilesi ye-imeyile yayo nayiphi na amaxwebhu afunekayo ukuxhasa usetyenziso lwazo njengefoto yobuso okanye iphepha ledatha yepasi, ezi zinokukhuphelwa kule webhusayithi okanye zithunyelwe nge-imeyile kwidilesi ye-imeyile yeNkxaso yoMthengi.
Yintoni ekufuneka yenziwe ngabemi baseUnited States ukufaka isicelo se-Visa yase-India (e-India eVisa)
Kuthatha ixesha elingakanani kubemi base-United States ukuba bagcwalise ifom ye-Intanethi
Abemi base-United States banokulindela kwangoko kangakanani ukufumana i-Visa yase-Indiya ye-elektroniki (eVisa India)
Ngawaphi amazibuko abanokufika ngawo abemi baseMelika e-India Visa (eVisa India)
Yintoni ekufuneka yenziwe ngabemi base-United States emva kokufumana kwi-Visa yase-India nge-imeyile (i-eVisa India)
Ijongeka njani i-Visa yaseIndiya kubemi baseUnited States?
Abemi baseUnited States kufuneka benze nini isicelo seVisa ukuya eIndiya?
Ngaba abemi baseMelika bayayidinga iVisa yaseIndiya (eVisa India) ukuba iza ngenqanawa yokuhamba ngenqanawa?
Izinto ezili-11 ezenziwayo kunye neendawo ezinomdla kubemi baseMelika
Ichibi lasePangong, eLadakh
IJaisalmer Fort, iJaisalmer
Ghats eVaranasi, Uttar Pradesh
IGoa endala, iGoa
UJama Masjid, eDelhi
IBombay yakudala, iMumbai
Itempile yeGolide, Amritsar
Amber Fort, eJaipur
Itempile yaseMahabodhi, iBodh Gaya
Iitempile zeKhauraura, Chattarpur
Isigodlo seSixeko, eUdaipur
United States of America Embassy eNew Delhi
I-Shantipath, iChanakyapuri 110021 iNew Delhi India